ရိုမီရို လူကာကူ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး ဖြစ်လာမှာလား . . . - SPORTS MYANMAR
ရိုမီရို လူကာကူ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး ဖြစ်လာမှာလား . . .
၂၀၁၃ ခုနှစ် ကြဂုတ်လ ၃၀ ရက် ၊ ချက်နိုင်ငံ ပရာ့ဂ် မြို့က အားကစားကွင်းကြီး ထဲမှာ ချဲလ်ဆီး ဟာ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် အသင်းနဲ့ ပွဲချိန် အတွင်း ၂ ဂိုးစီ သရေကျနေ ခဲ့တာကြောင့် ပင်နယ်တီ အဆုံး အဖြတ်ခံယူ ခဲ့ကြရ ပါတယ် ။ တဖက် ၄ ဂိုးစီ ဝင်ပြီး သရေ ဖြစ်နေချိန် မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ဘက်က လူငယ် တိုက်စစ်မှူးလေး လူကာကူ ရဲ့ ကန်ချက် ဟာ ဘိုင်ယန်ဂိုးသမား နူအာ အတွက် လွယ်ကူစေခဲ့ပြီး ဘိုင်ယန်ကို ချန်ပီယံ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်တွေ ကတော့ ဒီမြင်ကွင်းကို မေ့နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ လူကာကူ ရဲ့ ချဲလ်ဆီး ကစားသမား ဘ၀ ဟာလည်း အဲ့ဒိည အပြီးမှာ နိဂုန်းချုပ် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ၂၀၁၂ – ၁၃ ရာသီမှာ ဝက်စ်ဘရွန်း ကို တရာသီ အငှား ထွက်ကစားပြီး ပြန်လာ ခဲ့ပေမယ့် ဒီတကြိမ် မှာတော့ လူကာကူ တယောက် ပြန်မလာ တော့မယ့် ထွက်ခွာခြင်း မျိုးနဲ့ စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ်ကို နှုတ်ဆက် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၈ နှစ် အကြာမှာတော့ ရိုမီရို လူကာကူ ဟာ အရင်ကနဲ့ မတူတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ် ကို ပြန်ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပါပြီ ။ ဒီတကြိမ် မှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံသား ဟာ ပရာ့ဂ်မြို့ ညချမ်းက အရှုံးသမားပေး မဟုတ်တော့ ပါဘူး ၊ စီးရီးအေ ချန်ပီယံ တဦး ဖြစ်လာခဲ့ ပါပြီ ။
လူကာကူ ဟာ စီးရီးအေ ကစားသမားဘ၀ ၂ ရာသီ အတွင်းမှာ ၉၅ ပွဲ ကစားခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး နဲ့ ဖန်တီးမှုပေါင်း ၈၀ တိတိ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ၉၅ မိနစ်တိုင်းမှာ ၁ ဂိုး ပါဝင် ပတ်သက် နိုင်ခဲ့တာပါ ။ သူ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဟာ အင်တာမီလန် ကို ၁၀ နှစ်ကြာ ဝေးကွာ နေတဲ့ စီးရီးအေ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံဆုကို ပြန်လည် ရယူရာမှာ အရေးပါစေခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ မနှစ်က ရာသီ တုန်းက အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှု အများအပြား ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဆုံးသတ် ကောင်းမွန်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေ မရှိခဲ့တာကြောင့် သွင်းဂိုးတွေကို ရသင့်သလောက် မရဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အခု လူကာကူ ဟာ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ အတွက် သူ တချိန်က ကျဉ်လည် ခဲ့တဲ့ နေရာကို ပြန်ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပါပြီ ။
လူကာကူ ဟာ အဆုံးသတ် ကောင်းမွန်ရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့မှာ တိုက်စစ်မှူးကောင်း တယောက်ရဲ့ အခြားသော အရည်အချင်းတွေလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ် ။ ဘယ်ခြေ ၊ ညာခြေ ၂ မျိုးစလုံး နဲ့ ဂိုးသွင်း နိုင်သလို အမြင့်ဘော အားသာချက်လည်း ရှိသူပါ ၊ ဒါက ချဲလ်ဆီးရဲ့ ဝေဟင် အသာစီး ရယူမှုကို ထပ်လောင်း အားဖြည့် စေမှာ အသေအချာပါပဲ ။
နာမည်ကျော် YouTuber Nouman ရဲ့ သုံးသပ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုမှာ လူကာကူ ဟာ ပြိုင်ဘက် ခံစစ်သမား တွေကို သူ့ရဲ့ ကာယပိုင်း ကြံ့ခိုင်မှုကို အသုံးချပြီး ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တာတွေကို ပြသထားခဲ့ ပါတယ် ။ လူကာကူ ဟာ သူ့ရဲ့ လက်နဲ့ အနားကပ် လာတဲ့ ခံစစ်သမားကို တွန်းထားနိုင်ပြီး ဒီလို တွန်းထားမှုဟာ သူတို့ ၂ ယောက် အကြားမှာ နေရာလွတ်ကို ဖြစ်လာစေခဲ့ ပါတယ် ။
MILAN, ITALY – APRIL 11: Romelu Lukaku of FC Internazionale reacts after the Serie A match between FC Internazionale and Cagliari Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on April 11, 2021 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
ဘောလုံးရောက်လာချိန် မှာတော့ လူကာကူ ဟာ ဘယ် ( သို့ ) ညာ ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး လက်နဲ့ တွန်းထားတဲ့ အကွာအဝေးကြောင့် ပြိုင်ဘက် ခံစစ်သမား ဟာ လူကာကူ ကန်သွင်းဖို့ ကြိုးစားမှုကို မတားဆီး နိုင်တော့တာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒီအားသာချက်ကြောင့် လူကာကူ ဟာ အထောင် တိုက်စစ်မှူး တဦး ရဲ့ ကဏ္ဍတွေ ဖြစ်တဲ့ Hold-up Play, Target Man နေရာတွေ မှာလည်း အားကိုးလို့ ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး ကာယအားသာချက်ရှိမှုဟာ ချဲလ်ဆီး ကို ဒုတိယဘောလုံး ( Second ball ) တွေ အတွက် အခွင့်အရေးတွေ ပိုမို ရရှိ စေလာနိုင်ပြီး ဟာဗက် ၊ မေဆင်မောင့် ၊ ဗာနာ တို့လို Runner တွေ အတွက် အကျိုးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ Nouman က သုံးသပ်ထားခဲ့ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ပြိုင်ဘက် ခံစစ်ကြောင်းရဲ့ နေရာလွတ်တွေကို ပြေးလွှား ထိုးဖောက် နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဟာဗက် ဟာ လူကာကူ နဲ့ အကောင်းဆုံး အတွဲအဖက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သူက ဆိုထားပါတယ် ။
လူကာကူ ဟာ သွက်လက် ဖျက်လတ်မှုမှာ အားနည်းချက် ရှိပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပြေးလွှားနှုန်းဟာ အခြား အထောင် တိုက်စစ်မှူးတွေထက် မသာရင်တောင် မနိမ့်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် တန်ပြန် တိုက်စစ် ကနေ အကွာအဝေး ရှည်ရှည်ပြေးရတိုင်းမှာ လူကာကူ ရဲ့ ကာယ နဲ့ အရှိန် ပေါင်းစပ် ထားတဲ့ အဟုန်ကို တားဆီး နိုင်မယ့် ခံစစ်သမား များများ စားစား မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
လူကာကူ ရဲ့ နောက်ထပ် အားသာချက် ကတော့ သူဟာ တကိုယ်ကောင်း မဆန်တဲ့ Team Player ဖြစ်နေတာ ပါပဲ ။ ဘယ်ဂျီယံသား ဟာ မနှစ်က အင်တာမီလန် အသင်းမှာ အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှု ၅၈ ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒိ အနက် က ၁၁ ကြိမ်ဟာ ဂိုးတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ အင်တာမှာ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အများဆုံး ကစားသမားကတော့ နီကိုလို ဘာရဲလာ ပါပဲ ။
ခြုံငုံ သုံးသပ်ရရင်တော့ လူကာကူ ဟာ သမားရိုးကျ အထောင်တိုက်စစ်မှူး တယောက်ရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ပါတယ် ။ အပြောင်းအရွှေ့ ကာလ အစောပိုင်းတုန်းက ချဲလ်ဆီး ဟာ ဘိုင်ယန် တိုက်စစ်မှူး လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို ချဉ်းကပ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ ပါတယ် ။ အခု သူတို့ လီဝန်ဒေါ့စကီး လို အရည်အသွေး ရှိတဲ့ တိုက်စစ်မှူး တယောက်ကို လီဝန်ဒေါ့စကီး ထက် ၅ နှစ်လောက် ငယ်တဲ့ အရွယ်မှာ ရရှိခဲ့ ပါပြီ ။
လူကာကူ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာ ကတော့ ၂ ခု ရှိပါတယ် ။ တခုကတော့ အသင်းလိုက် ပြေးလွှားတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ မောင့် ၊ ပူလီဆစ် ၊ ဟာဗက် တို့နဲ့ အပြိုင် ပြေးလွှားနိုင်မလား ဆိုတာပါပဲ ။ နောက်တခု ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ခံစစ်မှူးတွေ ဟာ အီတလီ ကလပ်က နောက်တန်းတွေထက် ပိုသန်သလို ပိုလည်း မြန်ကြ ပါတယ် ၊ ဒါကြောင့် အီတလီ မှာ ခံစစ်သမားတွေကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့သလိုမျိုး အင်္ဂလန် မှာ လူကာကူ လုပ်ပြ နိုင်မလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူကာကူ ဟာ ချဲလ်ဆီး ကို အရှုံးသမား ထပ်ဖြစ်ဖို့ ပြန်ရောက်လာတာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ် ။